Netflix vs Amazon Prime Video - Fampitahana Farany - Fialam-Boly
Amin'izay olona mipetraka ao an-trano amin'izao fotoana izao, nanjary nalaza ny serivisy mivantana toy ny Netflix sy Amazon Prime Video. Satria ny karazana atiny dia somary vaovao kokoa raha ampitahaina amin'ny nentim-paharazana boaty na tariby napetraka eo amboniny . Ankoatr'izay, tsy mila manivana izy ireo satria tompony ny lampihazo, izay mahafaly ny atiny ho an'ny sokajin-taona rehetra.
Taona vitsivitsy lasa izay, tsy nisy ny fifaninanana toy izany, fa ankehitriny ny tsirairay dia maniry sombin-mofo.
Netflix vs Amazon Prime Video - Topy maso ankapobeny
Topimaso an'i Netflix:
Netflix dia novolavolaina tany Etazonia tamin'ny 1997 ary nanomboka tamin'izay dia nahasarika mpijery tsy an-kanavaka izy io noho ny karazana atiny sy ny fampiasana azy mora foana. Hatramin'izao, ny isan'ny mpampiasa ao amin'ny Netflix dia mahatratra 167,1 tapitrisa. Noho io fiakarana io dia nahazoana vola 20.156 miliara mahery izy ireo.
Izany no nahatonga an'i Netflix ho lohany mivantana amin'ny sehatra streaming.
Misorata anarana amin'ny fitsarana maimaim-poana ao amin'ny Netflix
Topimaso amin'ny horonan-tsary Amazon Prime:
Raha toa ny Amazon Prime Video dia somary vaovao amin'ny taona fanombohan'ny 2006. Ny tahan'ny fitomboana dia somary tsy mitovy amin'ny Prime Video. Tamin'ny 2008 ny orinasa dia namerina namoaka ny serivisy mivantana amin'ny Amazon Video araka ny tinady, saingy mbola tsy nahazo izany lazany izany izy. Tamin'ny taona 2016 vao nandefa ny India Prime Video tany India niaraka tamin'ny iray amin'ireo atiny voafantina tsara indrindra ary nahazo laza be.
Hatramin'izao, Amazon Prime Video dia manana mpampiasa 150+ tapitrisa. Ny vola azon'ny Amazon Prime Video dia manodidina ny $ 3,6 tapitrisa, manome fifaninanana henjana ho an'ny Netflix.
Midira Fitsarana maimaim-poana amin'ny horonan-tsary
Netflix vs Amazon Prime Video - Ady amin'ny vidiny
Andao jerentsika ny mason'ny vorona momba ny drafitry ny vidiny atolotry ireo serivisy fitaterana video an-tserasera ireo.
Drafitra momba ny vidin'ny Netflix -
Netflix dia manana safidy maromaro raha ny amin'ny vidiny sy ny drafitra no resahina. Misy endri-javatra tsy miovaova, na inona na inona drafitra novidinao. Anisan'izany ny fiambenana amin'ny fitaovana rehetra, sarimihetsika tsy voafetra, ary Seho amin'ny fahitalavitra , ary afaka manafoana ianao amin'ny fotoana rehetra.
Drafitra fototra:Ny ambany indrindra dia manomboka amin'ny $ 8,99 isam-bolana. Ity drafitra ity dia manana kalitaon'ny horonantsary tsara hatramin'ny 480p, ary ny isan'ny efijery azon'ny mpampiasa jerena dia voafetra amin'ny 1. Miaraka amin'ny fahaizan'ny mijery sarimihetsika , Aseho amin'ny fitaovana tianao rehetra.
Drafitra mahazatra:Manomboka amin'ny $ 13,99 isam-bolana. Ny kalitaon'ny horonantsary dia tsara kokoa noho ny drafitra teo aloha izay miakatra hatramin'ny 1080p. Manohana hatramin'ny efijery 2 isaky ny mandeha izy io. Ity no drafitra izay safidin'ny ankamaroan'ny olona.
Drafitra Premium:Araka ny lazain'ny anarany, premium ihany koa ny vidiny, manodidina ny $ 17,99 isam-bolana. Izy io dia manohana ny 4K sy HDR, noho izany ny traikefa fijerena no tsara indrindra raha premium no resahina. Izy io koa dia hamela efijery 4 amin'ny fotoana iray.
Drafitra momba ny vidin'ny vidéo Amazon Prime -
Amazon dia manana fomba hafa amin'ity raharaham-barotra ity. Tsy maintsy mividy ny Prime ianao amin'ny rafitr'izy ireo handefasana ny Amazon Prime Video sy ny tombontsoa hafa. Prime Video dia azo vohana miaraka amin'i Prime fa tsy irery serivisy mivantana , izay manohana an'i Amazon Prime Video. Tranga hafa eto Etazonia izay ahafahanao manana safidy hamaha ny Prime Video fotsiny. Na izany aza, rehefa mandeha ny vidiny, misy fomba roa ahafahanao misafidy ny Amazon Prime Video:
Drafitra isam-bolana:$ 12.99 isam-bolana dia homena vola tsy misy fetra amin'ny isan'ireo fitaovana na efijery na kalitaon'ny horonantsary. Izy io dia manohana ny 4K sy HDR feno. Misy fahasamihafana izay tsy azonao foanana amin'ny fotoana rehetra. Mila miandry ny volana hanombohana ianao alohan'ny hanafoanana.
Drafitra isan-taona:Izany dia handany anao ambany noho ny isam-bolana satria manomboka amin'ny $ 119 isan-taona. Tsy miova ireo fiasa, fa kosa mandoa isan-taona ianao fa tsy isam-bolana.
Horonantsary voalohany Amazon (toy ny standalone irery any Etazonia):Azonao atao ny mividy ny tombony amin'ny $ 8.99 isam-bolana. Hitohy hitovy ny zava-drehetra, saingy tsy ho afaka hanana tombony mifamatotra amin'ny rafitry ny fandefasan'izy ireo ianao.
Netflix vs Amazon Prime Video - Katalaogin'ny Atiny Video
Ny katalaogin'i Netflix dia mahavariana miaraka amin'ny endri-javatra; tsy misy sehatra hafa afaka mamerina.
Sarimihetsika / fampisehoana maro karazana: manana be dia be izy io lisitry ny sarimihetsika / seho izay mitentina 5665+ lohateny. Tsy misy karazana tavela tsy voakitika ao amin'ny Netflix, manomboka amin'ny anime ka hatramin'ny hetsika ary fanadihadiana. Izy ireo koa dia manana habe am-boalohany, izay atokana ho azy ireo ihany. Ny sasany amin'izy ireo dia ahitana ny The Punisher miaraka amin'ny naoty IMDB 8,5, ny Black Mirror IMDB naoty 8,8, ny House of Cards IMDB naoty 8.6, ny mavitrika Dark IMDB an'ny 8.8 maro hafa.
Ny algorithm an'ny Netflix dia afaka mamorona ny atiny mifototra amin'ny safidinao. Rehefa avy mijery seho na sarimihetsika ianao dia hangataka anao handatsaka ny tianao na ny tsy tianao. Rehefa manao izany ianao dia hampiseho aminao ny atiny tianao sy mifototra amin'ny safidinao i Netflix. Ity no iray amin'ireo antony lehibe indrindra hisafidianana an'i Netflix.
Netflix dia afaka manome ny isa feno taona sy manana fifehezana tsara indrindra an'ny ray aman-dreny. Miaraka amin'ny fahafahan'ny ray aman-dreny manidy an'i Netflix rehefa manandrana miditra amin'ny atiny 18+ ny zanany.
Amazon Prime Video dia manana fomba hafa amin'ny rafitra algorithm iray manontolo. Io no manana atiny be indrindra.
Sarimihetsika / fampisehoana maro karazana: Ny habetsaky ny seho hita ao amin'ny Amazon Prime Video dia goavana, miakatra hatramin'ny 20 392 lohateny. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny Prime Video dia ny fahazoany zon'ny sarimihetsika mandeha ao amin'ny heathers. Afaka iray na roa volana dia afaka manampy ny sarimihetsika amin'ny tranomboky. Na ny Amazon Prime Video aza dia afaka manome orihinal sasany tsara. Ny sasany amin'izy ireo dia misy ny naoty zazalahy IMDB an'ny 8.7, ny laharam-pahamehana Ramatoa Maisel IMDB 8,7, naoty Fleabag IMDB 8,7, ny laharana The Family Man IMDB 8,3.
Ny algorithm an'ny Amazon Prime Video dia afaka manivana ny atiny mifanaraka amin'ny toetranao. Raha faly ianao ary te hijery hatsikana kely fo dia afaka mandeha any amin'ny fizarana toe-po ianao ary ho afa-po. Toy izany koa ny alahelo, tantaram-pitiavana na fihetsika. Ny zavatra tsara indrindra momba ny Amazon Prime Video dia ny fampisehoana ny naoty IMDB eo akaikin'ny sinopsis sy fampisehoana an-tsarimihetsika. Noho io dia afaka misafidy ny atiny araka ny toetrany ny mpampiasa.
Ny rafitra naoty an'ny Amazon Prime Video dia tsy dia henjana toa an'i Netflix; manome isa fotsiny araka ny sivana fa tsy fameperana mavesatra toa izany.
Ny mpampiasa-interface dia manintona ny masony ary ny mpampiasa dia manintona avy hatrany ny tile. Betsaka ny fampahalalana omena ao anaty karatra kely, izay tsy maharitra fotoana hamakian'ilay mpampiasa. Ary koa, manohy manova ny sarony amin'ny sarony izy ireo amin'izay mahasarika kokoa ny rafitra. Misy endri-javatra fanampiny toy ny mitsambikina na mijery amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy ny autoplay.
Ny mpampiasa-interface dia sehatra iray izay tsy ananan'ny Amazon Prime Video betsaka. Tsotra ihany. Tsy misy karatra na fampahalalana aseho toa izany. Satria vaovao izy ireo dia miasa amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa izy ireo. Tsy manana endri-javatra fanampiny io afa-tsy ny mitsambikina.
Netflix vs Amazon Prime Video - Fahafahana fitaovana
1. Fahitana fitaovana Netflix
Netflix dia misy amin'ny fitaovana rehetra azonao eritreretina. Manomboka amin'ny mobiles ka hatrany amin'ny consoles ka amin'ny solosaina finday. Azonao atao ihany koa ny manohy mijery hatrany amin'ny toerana nijanonanao tamin'ireo fitaovana ireo. Na izany aza, ny interface-ny mpampiasa dia mijanona ho iray ihany amin'ny ankapobeny. Izy io koa dia misy ho an'ny fitaovana notched izay midika hoe ireo fitaovana izay tsy manana ny tahan'ny fenitra mahazatra. Afaka manenjana ny famahana ny efijery izy io nefa tsy manimba ny kalitao. Ny atiny HDR dia tohana tanteraka, ary manararaotra tsara izany.
2. Famerenana fitaovana Amazon Prime Video
Na ity serivisy streaming ity dia misy amin'ny fitaovana rehetra. Na izany aza, rehefa manandrana mampiasa ilay endri-javatra manohy mijery amin'ny telefaona android ianao noho ny hadisoana sasany dia mahalana foana. Izy io koa dia tsy mahazaka ny fanapaha-kevitra nivelatra ho an'ny fitaovana marihitra. Hafahafa ihany ny tahan'ny lafiny amin'ny solosaina finday, ary ny atiny dia tsy hita amin'ny efijery feno.
Ka, iza no nandresy tamin'ny farany, andao hifanakalo hevitra?
Pricing-Mpandresy Amazon Prime Video.
User Interface-Mpandresy Netflix.
Fifanarahana fitaovana -Mpandresy Netflix.
Extra Features-Mpandresy Amazon Prime Video.
Mandresy i Netflix satria afaka maharesy fandresena betsaka noho i Amazon amin'ny faritra maro. Na dia kely eo amin'ny lafiny lafo aza izy io, dia mendrika ny vola rehetra. Ny tany am-boalohany Netflix dia tsara lavitra noho ireo an'ny horonantsary amazon prime. Tena mahay ny UI.
Ny fisian'ny fitaovana dia tsara kokoa ihany koa. Raha afaka mandoa dolara vitsivitsy ianao, dia andramo ny Netflix. Eny, ny vaovao tsara dia manome anao fitsapana iray volana maimaim-poana. Ka manantena aho fa afaka manapa-kevitra hoe iza no tsara indrindra amin'ny famakiana ny lahatsoratray. Azafady azafady ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany ny eritreritrao raha misy izany.
mijery horonantsary tsy misy ao amin'ny firenenao
hijery sarimihetsika maimaim-poana
psn code generator tsy misintona
ny fomba fampiasana ny fitsarana maimaim-poana Amazon